IFTIINKACUSUB.COM: Laba masuul oo isku magac ah oo xil isku qabsaday.
Laba masuul oo isku magac ah oo xil isku qabsaday.
Labada masuul ee la kala yidhaahdo Xildhibaan Maxamed axmed Obsiiye iyo Aqoon yahan Maxamed Cabdilaahi Obsiiye ayaa waxa ay isku qabsadeen xililkii uu Madaxwayne Axmed Maxamed Maxmuud Siilaanyo uu dhawaan magacabay .
Xilkaasi oo ahaa wasiirka Shaqada iyo arimaha Bulshada,balse ninka sida saxa ah magacan u leh isla markana ah ninka loo magacabay xilkan ayaa ah Maxamed Cabdilaahi Obsiiye oo aan isagu ahayn xildhibaan,labadan nin ooo kasoo jeeda gobolka Awdal.
Inta aan xasuusto waxa aad moodaa in ay tahay markii sadaxaad oo dad isku magac ahi ay sidan oo kale isaga horyimadaan xilal loo magacaabay.